नेपाल आज | १० महिनाअघि देवकोटाले भनेका थिए, ‘हामी कसैलाई जीवन दिन सक्दैनौं भने खोस्ने अधिकार पनि छैन’ (भिडियोसहित)
१० महिनाअघि देवकोटाले भनेका थिए, ‘हामी कसैलाई जीवन दिन सक्दैनौं भने खोस्ने अधिकार पनि छैन’ (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । दश महिना अघि नेपालआज डटकमका लागि डा. उपेन्द्र देवकोटाले जीवन र दर्शनबारे धेरै गहन विषय बोलेका थिए । त्यो बेलासम्म उनलाई आफ्नो शरिरमा क्यान्सर वृद्धि भइरहेको कुनै जानकारी थिएन । सायद कुनै लक्षण देखिएको पनि थिएन होला ।
नेपालका चर्चित न्युरो सर्जन देवकोटालाई हामीले सोधका थियौं, के भगवान हुन्छन् ? उनको जवाफ थियो, ‘विज्ञानले भगवान हुन्छन् भन्न सक्दैन । तर भगवान छैनन् भनेर पनि भन्न सकेको छैन ।’
मान्छे शारिरीक रुपमा स्वस्थ हुनु र अध्यात्मिक ढंगले स्वस्थ हुनु फरक कुरा हो भन्ने मत देवकोटाको छ । उनी भन्छन्, ‘अध्यात्मिक ढंगले स्वस्थ हुन कुनै आस्था र विचार बनाउनु पर्छ । बनाउन सकिदैन भने अरुले बनाएको पथमा हिँड्दा पनि हुन्छ ।’
अरुको जीवन लिने पनि छन् । जीवन जीउँन सहज बनाइदिने डाक्टरहरु पनि हुन्छन् । डा. देवकोटा भन्छन्, ‘हामी कसैलाई पनि जीवन दिन सक्दैनौं । यसकारण अरुको जीवन खोस्ने अधिकार पनि कसैलाई हुँदैन । हामी डाक्टरहरुले त कसैको जीवन अलिकति जोगाइदिने र जीवन सहज बनाइदिने मात्रै हो ।’
बिरामीलाई डाक्टरले कति हदसम्म गएर जोगाउन सक्छ त ? देवकोटाको तर्क छ, ‘बिरामी शरिरले आफ्नो उपचार आफै गर्छ । त्यसमा डाक्टरले अलिकति सहज पारिदिने हो । जब शरिरले आफ्नो उपचार आफै गर्ने प्रयत्न गर्न छाड्छ, त्यसपछि संसारको कुनै पनि डाक्टर, अस्पताल, प्रविधिले उसको उपचार गर्न सक्दैन ।’
डा. देवकोटालाई हामीले सोधेका थियौं, ‘डा. बाबुराम भट्टराई र तपाई सहपाठी हुनुहुन्थ्यो । तपाई डाक्टर, उहाँ इञ्जिनियर । तपाईले धेरैको ज्यान जोगाउनु भयो, उहाँको आन्दोलनले १७ हजारको ज्यान लियो । गुरु एउटै, विद्यालय एउटै तर ज्ञान कसरी फरक पर्यो ?’ यो प्रश्नमा डा. देवकोटाले भनेका थिए, ‘त्यता तिर जाँदै नजाऔं । तपाईहरु नै विश्लेषण गर्नुहोला । उहाँसँग अझै १०–२० वर्ष समय छ । केही गर्नुहोला । म पनि १०–२० वर्ष बाँचुला । म चाहिँ जीवन संघर्ष हो भन्ने ठान्छु ।
मैले मेडिकल कलेजमा ५० वटा जति परीक्षा दिएँ होला । तर त्यो खास कुनै परीक्षा नै रहेनछ । अहिले मेरा हरेक बिरामी मेरो लागि परीक्षा हुन् । म आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु । म कुनै पनि अर्थमा बाबुराम भट्टराईसँग तुलना गर्दिनँ । किनभने ती कुराहरु केटाकेटी बेलाको हो ।’
नेपाली मिडियाले अनावश्यक मान्छेलाई पनि हिरो बनाउँछ (भिडियोसहित)
भीम रावललाई सांसद् आलेको कडा जवाफ, ‘पद नपाएपछि रावल छटपटाए’ (भिडियोसहित)
आइतबार, १० चैत २०७५
यस्तो नागरिकता विधेयकमा टेकेर विदेशीले जनसांख्यिक आक्रमण गर्न सक्छन् (भिडियोसहित)
हेलिकोप्टरको सिट हटाउने निर्णय उल्टाउन लविङ गर्दै व्यवसायी
गृह सहसचिव हुँ भन्दै साढे ५ करोड ठगी गर्ने पक्राउ
सिलिण्डर पड्किएर चार मजदुरको मृत्यु
[email protected] [email protected] editor[email protected]